Xildhibaano loo heysto hurinta dagaal beeleed oo dacwad lagu soo oogay - Jowhar Somali Leader
Home Somali Xildhibaano loo heysto hurinta dagaal beeleed oo dacwad lagu soo oogay
Xildhibaano loo heysto hurinta dagaal beeleed oo dacwad lagu soo oogay
Maxkamadda Ciidamada qalabkasida ayaa dacwad ku soo oogtay Xildhibaano, Guddoomiyihii degmada Wankaweyn. iyo Saraakiil ciidan, kuwaasoo lagu eedeeyay inay ka qeyb qaateen hurinta dagaal beeleed ka dhacay degmada Wanlaweyn ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Xildhibaanada dacwada lagu soo oogay ayaa ka kala tirsan Maamulada Hirshabeelle iyo Koofur Galbeed, waxaana lagu kala magacaabaa Xildhibaan Aadan Cabdi Faarax Kala Dire iyo Mayow Mustaf Xasan, waxaana loo heystaa inay ka qeyb qaateen dagaaladii ka dhacay Wanlaweyn.
Waxaa kaloo dacwad lagu soo oogay Guddoomiyihii degmada Wanlaweyn Maxamed Siidow C/raxmaan, kaasoo shaqada laga joojiyo iyo Xildhibaan hore Maxamed Taraafiko iyo Hoggaamiyo Maleeshiyo Cabdi Nuunow Afweyne
Sidoo kale waxaa iyana dambi lagu soo oogay Abaanduulaha qeybta 7aad ee Ciidanka Xoogga dalka oo lagu magacaabo Salaad Tifow.
Xeer Ilaaliye kuxigeenka Maxkamadda Ciidamada ayaa ka dalbaday Maamulada Koofur Galbeed iyo Hirshabeelle in laga dalbanayo Xildhibaannadaas lagu bilaabo baaritaan, una hoggaansamaan inay hor-yimaadaan Maxkamadda.
Maxkamadda Ciidamada ayaa sheegtay in baaritaano dheeraad ah lagu sameyn doono Xildhibaannada lagu eedeeyay hurinta dagaal beeleedyada.
Ciidamo ka tirsan Danab ayaa la kala dhex dhigay dhinacyadii ku dagaalamay Wanlaweyn, waxaana Guddoomiyaha Maxkamadda Ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute uu amray in nolol iyo geeri lagu soo qabto maleeshiyaadka diidan degenaanshaha ee ka qeyb qaadanaya dagaal beeleedyada.